သာမာန်အားဖြင့် ပုံမှန် လူတယောက် ရဲ့သွေးဖိအားဟာ အပေါ်သွေး 140mmHg နဲ့ အောက်သွေး90mmHg ထက်မပိုသင့် ပါဘူး။ သွေးတိုးရောဂါဆိုတာ ပုံမှန်ထက်ကျော်လွန်ပြီး သွေးဖိအား အပေါ်သွေး 140mmHg နဲ့ အောက်သွေး 90mmHg ထက် များနေခြင်းပါ။
သွေးတိုး ရောဂါ ဖြစ်ပွားတဲ့ သူတွေ ထဲမှာ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းကသာ ဘာကြောင့် ဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း အရင်း (Underlying Cause) ကို ရှာ လို့ရ ပါတယ်။ ဥပမာ-ကိုယ်ဝန် ဆောင်ခြင်း၊ ဟော်မုန်းဓာတ်မမှန်ခြင်း ၊ ဟော်မုန်းဆေးများစားခြင်း (Steroid/သန္ဓေတားဆေး)၊ ကျောက်ကပ် ရောဂါ နှင့် ဆီးချို ရောဂါတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ကျန်တဲ့ သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု 90%မှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ အကြောင်းအရင်း မတွေ့ရပါဘူး။
သွေးတိုးရောဂါ ကို မကုသ ဘဲ ထားပါက ဘာတွေဖြစ် ပွားစေနိုင်ပါလဲ
သွေးတိုး ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကြာရှည်လာတဲ့ အခါမှာ သွေးကြောလေးတွေ မာကြောပျက်စီး စေပါတယ်။ နှလုံး ညှစ်အား မကောင်းတော့ခြင်း၊ လေဖြန်းခြင်း (TIA)နှင့် လေဖြတ်ခြင်းများကို ၏ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် ထက်ပိုသော သွေးပေါင်ချိန် (140/90ထက်များနေပါက) သွေးလွှတ်ကြောတွေမှာ ဖိအားများ ပြားလာ ပါတယ်။ သွေးကြောအတွင်းနံရံ မာကြောတောင့်တင်းလာပါတယ်။ သွေးကြော အတွင်းနံရံများ မှာ အဆီများ စုပြုံလာပြီး သွေးကြောများ ကျဉ်းမြောင်းလာပါတယ်။
သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်ပွား ပါက ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်လဲ။
သွေးတိုးရောဂါ ရှိသူများ အတွက် စားသောက်မှု ပုံစံများ
သွေးကြော ကျဉ်းခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို လျော့ချဖို့အတွက် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် အေ၊ ဗီတာမင် စီ၊ ဗီတာမင် အီး ပါဝင်တဲ့ အစားအစာများ စားသုံး ပေးသင့်ပါသည်။
မုန်လာဥနီ၊ လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဂျုံစေ့၊ အစေ့အဆန်များ(နေကြာစေ့၊ အယ်မွန်) စားသုံးသင့် ပြီး ကျန်းမာစေတဲ့ Omega –3ဖက်တီးအက်ဆစ်ပါတဲ့ ပင်လယ်ငါးများ (ငါးသေတ္တာငါး၊ တူနာ၊ ဆာဒင်းနဲ့ ဆယ်မွန်ငါးများ)ကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
Omega – 3ကဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မကောင်းတဲ့အဆီဓာတ် LDL Cholestrolကို ကျစေပြီး နှလုံးသွေးကြာကျဥ်းရောဂါကိုပါ ကာကွယ်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အမျှင်ဓာတ်များသော အစား အစာတွေ ထမင်း၊ ပေါင်မုန့်ညို (ပေါင်မုန့်ကြမ်း)နှင့် ကွေကာများကို အဓိကစားသုံး ပေးသင့်ပါတယ်။ အဆီများတဲ့ နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို လျော့စားပါ။ အ
ငန်များသောအစားအစာ နှင့် အဆီကဲသော အစားအသောက်များကို လျော့စားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ရာမှာလည်း အစားအစာများကို ဆား၊ ငံပြာရည်များများ မထည့်သင့်ပါ။
အထားခံအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ကြက်အူချောင်း၊ Ham ဝက်ပေါင်ခြောက် နှင့် ဆားရေစိမ်သနပ်များကိုလုံးဝမစားသင့်ပါဘူး။ အမျှင်နှင့် ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ပါဝင်သောငှက်ပျောသီး၊ သစ်တော်သီးနှင့်ထောပတ်သီးများကိုမကြာခဏ စားသုံးပေးသင့်ပါသည်။
– နေ့စဉ်ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း၁၅မိနစ်ခန့်ပြု လုပ်ပေးပါ။
– သွေးကျဆေးများကိုဆရာဝန်ကြားချက်အတိုင်း နေ့စဉ် ပုံမှန်သောက်သုံးပေးပါ။
– ၁နှစ်တစ်ကြိမ် (သို့) ၆လ တစ်ကြိမ် အောက်ပါကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှူများကိုပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
– ဆီးစစ်ခြင်း၊ Blood urea. Electrolytes. Creatinine. ဆီးချို (သွေးချို) စစ်ဆေးခြင်း၊
– သွေးတွင်း အဆီဓာတ်(serum cholestrol (total. Hdl) .ECG ဆွဲခြင်း တို့ ကိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။
သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်ပွားပါ က နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုး များ အနေနဲ့ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ အချိန်မတိုင်ခင် နှလုံးညစ်အားမကောင်းခြင်း ရေရှည်ဖြစ်ပွားပါ ကသွေးလွှတ် ကြောများပျက်စီးစေခြင်း၊ သွေးကြောထုံးများဖြစ်ခြင်း၊ လေသင်တုန်းပြတ်ခြင်း ၊ရုတ်တရက်အမြင် ဝေဝါးခြင် း၊ စကားပလုံးပတွေးပြောခြင်း ၊တက်ခြင်းများ မျက်ကြည်လွှာထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း ၊ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း များ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ACE inhibitor (Enalapril, Captopril), ARB (Losartam)
Amlodipine & Verapamil, Dilitiazen (Calcium Chammel Blocker)
အားဆေးအနေနဲ့ကတော့ Omega –3Fatty Acid ကို တစ်နေ့တစ်လုံး သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Apr 27, 2021 Health Tips, Healthy Lifestyle